Kuvandudzwa kweBumbiro reMitemo yeNyika Kounza Mutauro
Kukadzi 09, 2017
Chief Justice Godfrey Chidyausiku (File Photo)
Sangano reAbammeli Human Rights Lawyers Network rinoti rakakwira kudare repamusoro-soro richipa chikumbiro chekuti pfungwa dzaro dzinzwikwewo nedare iri pamusoro penyaya yekusarudzwa kwemukuru wevatongi vematare, Chief Justice.
Nerimwe diviwo vamwe vanhu vanoti havazi kufara nekuvandudzwa kuri kuda kuitwa bumbiro remutemo une chekuita nekusarudzwa kwemukuru wevatongi, Constitution Amendment Number 1.
Gweta rinoshanda nesangano reAbammeli Human Rights Lawyers Network, VaMatshobana Ncube, vaudza Studio7 kuti sangano ravo rakaita inonzi intervention application muchirungu vachisvitsa chikumbiro chave kudare reSupreme Court uye nyaya iyi ichanzwikwa nemusi weMuvhuro svondo rinouya.
Mutongi wedare reHigh Court, Justice Charles Hungwe, vaive vapa mutongo wekuti boka reJudicial Services Commission, kana kuti JSC, rimbosendeka parutivi kusarudzwa kwaChief Justice sezvo mutemo une chekuita nekusarudzwa uku uri kuda kuvandudzwa.
VaNcube vati vane zvikumbiro zviviri zvekuti mutongo waJustice Hungwe unzi hauzi pamutemo uye kuti dare iri ripe chiga chekuti mutungamiri wenyika, VaRobert Mugabe, vadome mukuru wevatongi kubva pavanhu vatatu vakabvunzwa neveJSC.
Zvichakadaro, pamusangano wekuzeya nezvekuvandudzwa kwemutemo wekusarudzwa kwaChief Justice uyu waitwa muBulawayo, vamwe vanhu varatidza kusafara kwavo nehurongwa hwehurumende uhu.
Mumwe mugari, Amai Merjury Dube, vati vanotyira kuti kuda kuchinja mutemo uku inzira yebato riri kutonga reZanu PF yekuedza kupindira mumashandiro evatongi vematare epamusoro.
Pfungwa idzi dzatsinhirwawo naVaTineyi Mukwewa avo vanove murongi wemabasa musangano reAbammeli Human Rights Lawyers Network.
Vachipa maonero avo panyaya iyi, VaMoses Chinhengo, avo vaimbove mutongi wedare reHigh Court, vati kunyange hazvo kune vamwe vanoti kuvandudzwa kuri kuda kuitwa mutemo wekusarudzwa kwaChiefe Justice kuri kuuya apo bumbiro remitemo risati rave nemakore akawanda ravepo, bumbiro iri rinobvumidza kuvandudzwa kwemitemo yemunyika.
Vatiwo kana kuvandudzwa kwemitemo iyi kuchitwa negwara rinotevedzera mitemo iripo, havawone chakaipa.
Justice Chinhengo vati mafungiro avo ndeekuti kana mutemo uyu wavandudzwa, unofanirwa kuve nechiga chakajeka chekuti mutungamiri wenyika anofanirwa kusarudza mukuru wevatongi achishanda pamwe nedare reparamende.
Nyaya yekuda kuvandudza mutemo wekusarudzwa kwemukuru wevatongi yakonzera mutauro munyika, zvikuru muZanu PF umo mune kurwisana pakati pezvikwata zveG40 ne Team Lacoste.
Pari zvino mukuru wevatongi anosarudzwa mushure mekunge vanhu vanenge vachida kuita basa iri vabvunzurudzwa neboka reJSC.
Boka iri rinozoendesa mazita matatu kumutungamiri wenyika kuti vasarudze munhu mumwe chete anozoita basa iri.
Mutemo uyu uri kuda kuvandudzwa kuti mutungamiri wenyika akwanise kudoma munhu waanoda kuti aite mukuru wevatongi pasina boka reJSC sezvo zvichinji mamiriro akaita boka iri haaite kuti rikwanise kusarudza mukuru wevatongi.
Dare reparamende rinotarisirwa kutanga kufamba richinzwa pfungwa dzevanhu pamusoro pekuvandudzwa kwemutemo uyu svondo rinouya.
Chinzvimbo chemukuru wevatongi chiri kuda munhu anoita basa iri zvichitevera kuenda kumudyandigere kuri kuitwa nemukuru wevatongi, VaGodfrey Chidyausiku kupera kwaKukadzi.
Mukuru wevatongi vematare mutsva anotarisirwa kutanga basa musi wa 1 Kurume.